Jeesow: “Ciidanka laga wareejiyay Baarlamaanka,Jawaari ayey daacad u ahaayeen”. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Jeesow: “Ciidanka laga wareejiyay Baarlamaanka,Jawaari ayey daacad u ahaayeen”.
Jeesow: “Ciidanka laga wareejiyay Baarlamaanka,Jawaari ayey daacad u ahaayeen”.
March 17, 2018	32 Views
Waxaa uu tusaale u soo qaatay XIldhibaan ka mid ah Golaha shacabka oo uu sheegay in lagu bahdilay xarunta Villa Hargeysa islamarkaana lagu yiri “nooga bax hoolka”.
Guddoomiyaha Golaha shacabka oo isna xalay shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Golaha shacabka uu la wareegay Ra’isalwasaaraha Soomaaliya islamarkaana ay xarunta farahiisa ka baxday.
Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in inkasta oo uu sharci darro yahay mooshinka isaga ka dhanka ah haddana oggolyahay in golaha la hor geeyo islamarkaan kulankaas lagu qabto meel dhex dhexaad ah oo ay Beesha Caalamka iyo Culimadaba joogaan islamarkaana aan lagu qaban xarunta Golaha shacabka oo ay laanta fulinta la wareegtay.